Fikarohana momba ny firaisana Miaramila roalahy Japoney anankiroa no mibaribary any Birmania tamin'ny Ady Lehibe Faharoa amin'ny fanafihana avy any avaratra sy ny zaridaina madinika toy ny zazavavy kely, San sy Yin, ho any amin'ny renim-bary iray, ny tranon'izy ireo izay nahaterahan'ny rahalahy -
From: Ny firaisam-batana sy ny zavamananaina ao amin'ny vatana, Volan'ny 2, nataon'i Ian Stevenson, MD, pejy 2025-2034
Ny fianakaviana Burmese ao Thi, ny zanany lahy Htwe sy ny zanany vavy Kyi nandritra ny WWII Japoney
Nandritra ny Ady Lehibe faha-II, Japone dia nanafika sy nonina tao Birma, izay fantatra ankehitriny hoe Myanmar.
Tamin'ny Martsa 3, 1945, Tafika Britanika, niady tamin'ny Japoney, dia naka ny tanànan'i Meiktila Burmese. Nandeha an-tongotra avy any atsimo nankany amin'ny tanànan'i Pyawbe ireo Britanika, ka niatrika fanoherana mahery vaika avy amin'ny tafika Japoney. Ny British Anglisy naka ny Pyawbe tamin'ny Aprily 10, 1945.
Minlan, vohitra 3 kilometatra na manodidina ny 2 kilometatra atsimon'i Pyawbe, dia nipoaka avy eo ireo Allies. Araka ny nahitana ny fipoahana nahazatra nandritra ny hazavan'ny andro, dia nandositra ny tranon'izy ireo ny mponina Burmese tamin'ny fiposahan'ny masoandro ary nandositra tany ambanivohitra mba handositra ny fipoahana. Avy eo dia niverina tao an-tranon'izy ireo ny mponina ambanivohitra.
Mpivady iray nipetraka tany Minlan nandritra ity fotoana ity dia i U Chit Htwe, izay niasa ho mpanefy, ary Daw Khin Kyi vadiny. Ny rain'i U Chit Htwe, U Shwe Thi no anarany, niara-nonina tamin'ireo mpivady. Ho tsotra dia hiantso ny vadin'i Htwe, ilay vadin'i Kyi sy Htwe rain'i Thi.
Tamin'ny fiposahan'ny masoandro, Htwe sy Kyi dia nandeha tany amin'ny pagoda, tempolin'ny Bodista, tany ambanivohitra, mba handosirana ny horohoron-tany. Angamba noho ny taonany, ny ray Htwe, Thi, dia nijanona tao an-tranony tany Minlan hikarakara ny fananany.
Teo amin'ny Aprily 17, 1945, tanànan'i Minlan no niaritra fanafihana baomba mandatsa-dranomaso. Ny momba ny 3 PM tamin'ny tolakandro dia nipoaka ny fiaramanidina Allied, ary koa ny famonoana an'i Minlan tamin'ny basy.
Matoandron'ny Rahalahy Japoney anankiroa no namoy ny ain'ny fianakaviana Burmese sy nipoitra indray tamin'ny zazavavy kely, teraka tany amin'ny vehivavy Burmese izay nipetrahan'ireo rahalahy
Nandritra ity fanafihana ity, dia nahita jiosy Japoney roa i Thi, rain'i Htwe, nitondra basy, grenady sy antsy tanana, nandositra ny fanafihan'ny fiaramanidina Allied ho any an-trano, izay nahitana hazo tamarindro roa. Nihevitra i Thi fa niady ny hamono azy ny miaramila Japoney, noho izany dia nitsambikina tao amin'ny hadisoana i Thi izay efa nokarohin'ny fianakaviany ho fialofana amin'ny fitaovam-piadiana.
Rehefa tapitra ny fanafihan'ny alika avy any an-habakabaka, dia nivoaka avy tao amin'ny hady i Thi ary nahita fa feno ny afo ny Minlan. Hitany fa novonoina ireo miaramila japoney roa izay nirohotra nanoloana ny toerany ary izy ireo sy ny fitaovam-piadiany dia nandry teo amin'ny tany akaikin'ny hazo tamarindro. I Thi dia nihazakazaka tamin'io loza io tamin'ny fiarovana ny fianakaviana tany ambanivohitra tao amin'ny pagoda Buddhist.
Telo andro taorian'ny fanafihana an'i Minlan, Thi, ny zanany lahy htwe sy ny vadin'i Htwe, Kyi, niverina tany an-tanàna hijery ny nanjo ny tranony. Hitan'izy ireo fa may trano ny tranon'izy ireo, saingy mbola mijanona ireo hazo tamarinde roa an'ny trano. Ireo hazo ireo dia 10 metatra na metatra miala ny tranony.
Thi dia nanamarika fa nesorina ny fatin'ireo miaramila Japoney roa novonoina teo akaikin'ny hazo tamarind. Nopotehina ny kamiao japoney ary nodoran'ny fatin'ny miaramila japoney hafa maty. Tsy nisy ny fitaovam-piadiana miaramila Japoney efa nodimandry, izay heverina fa nentin'ireo mponina Burmese.
Noho izany, ny fahafatesan'ireo miaramila Japoney roa maty nandritra ny fanafihana an'habakabaka Allied momba an'i Minlan dia nitranga tamin'ny Aprily 17, 1945.
Xenoglossy: Kyi, ilay Vavy Burmese, niteraka zazavavy kambana, izay mahatadidy ny fiainana taloha ho toy ny miaramila japoney izay miteny Foreign Language
Manodidina ny 7 volana vitsivitsy taty aoriana tamin'ny 17 1959, tao Minlan, Kyi, tamin'ny taona 22, dia niteraka roa lahy, zazavavy virjiny, izay nantsoina hoe Htwe sy Kyi hoe Ma Khin San sy Ma Khin Yin. Ho tsotra, hiantso ireo zazavavy kambana hoe San sy Yin isika.
Rehefa nanatsara ny fahaizany miteny tamin'ny taona 3 ireo kambana, dia niteny tamin'ny fiteny izay tsy takatry ny fianakavian'izy ireo Burmese. Tsy niresaka tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo mikasika ny fiainany taloha nahatsiaro hatramin'ny taona 10 taona, fony izy ireo dia 13 taona. Ireo ankizivavy nasongadina tamin'ny sary eo ankavanana dia mitafy Miondrika eo amin'ny endrik'izy ireo, izay fanampiana hatsarana ampiasaina any Birmania.
Ao amin'ny fiteny Burmese, ireo kambana, fony izy 13 taona, dia nanao fanambarana mikasika ny fiainana taloha tahaka ireo rahalahy Japoney, miaramila novonoina tany Burma nandritra ny ady. Nilaza ireo kambana fa novonoin'izy ireo teo akaikin'ny trano naterany.
Ny Burmese Girls Twin San sy Yin dia mampahatsiahy ny fiainan'izy ireo taloha ho miaramila Japoney
Nilaza i San fa teo amin'ny fiainany taloha izy no zokiny lahy ho any Yin. Indrindra, nilaza i San fa 3 taona no zokiny kokoa noho i Yin tamin'ny fiainany taloha. Nanaiky i Yin tamin'ny fianakaviany fa izy no zandrin'i San.
Ny kambana dia nitatitra fa fony i San dia 15 taona nandritra ny androm-piainany taloha, ary i Yin dia 12 taona fony izy vao tafarina, maty ny rainy. Nilaza izy ireo fa niara-niaina tamin'ny reniny izy ireo, izay tsy voatery niasa satria nanana harena tsy miankina. Naneho fitiavana be dia be tamin'ny reniny taloha izy ireo. Nahatsiaro izy ireo fa any atsimo ny tranon'izy ireo any Japon ary ny tafon-tranony dia vita vy.
Ny Burmese Girls Twin dia mahatsiaro mangataka amin'ny Tafika Japoney amin'ny fiainany taloha
San fa nitantara i 18 fony izy mbola velona nandritra ny androm-piainany taloha, ka nanapa-kevitra ny ho mpilatsaka an-tsitrapo tao amin'ny tafika Japoney izy, fony izy tanora Japoney. Ny zandriny indrindra teo amin'ny fiainan'i San, tanora Yin, tsy te hisaraka amin'ny zokiny lahy ary na dia eo aza ny fanoheran'ny reniny, dia niditra tao amin'ny tafika japoney.
Yin, na dia zazavavy tamin'ny fahavelom-piainany aza, dia nilaza momba ny fanapahan-keviny taloha: "Tapa-kevitra ny hiaina na hiara-maty amin'ny rahalahiny izy."
Izy ireo, tamin'ny androm-piainany taloha, dia nihevitra fa nahafinaritra ny ho faty ho an'ny fireneny Japon. Nitantara izy ireo fa nanana taona iray niofanana ho miaramila tany Japana izy ireo ary nalefa tany ivelany mba hiadiana amin'ny ady.
Ny kambana dia nilaza fa nahatsiaro ny ady tao Burma izy ireo raha vao 25 taona efa-taona sy ilay tanora 22. Nifampizaran'izy ireo fa samy tsy nanambady talohan'ny nipetrahany ny ady.
Nilaza ihany koa ireo kambana fa i San, ilay zokiny lahy japoney, dia nanana marika telo misy kintana telo ary kintana telo kosa i Yin, ilay zandriny kosa, kintana iray monja. Notaterin'ireo kambana ihany koa fa i Yin, ilay zandriny lahy, dia lava noho ny zokiny lahy San.
Nilaza ireo kambana fa niaina tamin'ny sabatra, revolisionera ary grenady izy ireo tamin'ny fiainany Japoney. Nilaza ireo kambana ireo fa nanompo tao amin'ilay efitra iray izy ireo ary niaraka foana.
Tera-birmanina japoney mahatsiaro ny zava-niainan'ny Air Assault teo aloha izay nitarika ny fahafatesany
Tsaroan'ireo kambana fa niala sasatra tany Meiktila ireo Japoney ary nahita tany amin'ny tanànan'i Minlan izy ireo. Tsaroan'izy ireo ny fanafihana an'habakabaka avy any avaratra amin'i Minlan ary dia nihazakazaka izy ireo teo anelanelan'ny hazo tamarindro roa. Nifampizaran'izy ireo fa niparitaka tamin'ny tany izy ireo teo amin'ny toerana kely teo anelanelan'ny hazo. Ny kambana dia nilaza fa novonoina teo amin'io toerana io ry zareo, izay akaikin'ny toerana nipetrahan'izy ireo.
Aorian'ny fiainana mifandray: Taorian'ny fahafatesana, mitsidika ny reniny any Japana ireo miaramila miaramila Japoney, izay tsy mahatsapa azy ireo
Ny kambana birmanina dia nahatsiaro fa rehefa maty ho miaramila miaramila Japoney nandritra ny fiainany taloha izy ireo, dia nieritreritra ny reniny tany Japon ary nangataka ny fanampiany.
Rehefa maty ireo kambana, dia nilaza fa tonga dia tonga tany Japon izy ireo tany izay nahitan'izy ireo ny reniny, saingy tsy afaka nifandray tamin'izy ireo izy satria tsy nahita na nandre izany. Nalahelo sy kivy izy ireo.
Ny kambana dia nilaza fa tsy tadidin'izy ireo ny nanjo azy ireo taorian'ity fotoana ity tamin'ny renin'izy ireo taloha hatramin'ny faha-telo taonany, tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nahatadidy ny fiainany teo aloha izy ireo toy ny hoe, "Nifoha tamin'ny nofy izy ireo."
Taorian'ny nanambaran'ireo kambana ny fahatsiarovany ny fiainany tamin'ny fianakaviany, dia naneho ny tsy fahafaliany ho an'i Japana izy ireo ary nanambara ny faniriany hiverina any Japana. Io fitarainana hiverina any Japana io dia mbola nitohy hatramin'ny taona 16. Zava-mahagaga izany fihetsika izany, satria ny ankamaroan'ny Burmese dia naniratsira ny Japoney noho ny habibiana nataony tamin'ny vahoaka Burmese nandritra ny WW II.
Ny vehivavy japoney Burmes dia mampiseho ny fihetsika amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny fiainany taloha toy ny miaramila Japoney
Na dia ireo vehivavy kambana aza dia samy naneho fihetsika manan'olona izy ireo hatramin'ny faran'ny taona 17. Ohatra, samy tian'izy roa ny nanao pataloha na pataloha fa tsy akanjo.
Ian Stevenson, MD dia nanamarika tao amin'ny antontan-taratasy momba ireo tranga ireo fa nampiseho ny "fihetsika Japoney" ireo kambana. Ohatra, ireo kambana ireo dia naneho fankahalana ny Anglisy sy Amerikanina. Nitaraina momba ny hafanana tany Birmania sy ny mahatsikaiky ny sakafo izy ireo. Ireo kambana koa dia nanana fanirian-dava mafana ary rehefa tezitra izy ireo, izy ireo dia nanafintohina ny endrik'ireo izay nanakorontana azy ireo. Ny blasfemia dia matetika no notifirin'ny miaramila japoney rehefa nahatsapa ny tsy fanarahan-dalan'ireo mpiambina ny miaramila Japoney.
Ny vehivavy japoney Burmese dia manana toetra ara-batana mandinika ny fiainany taloha toy ny miaramila Japoney
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny vatan'ireo kambana dia toa mifanandrify amin'ny fiainany taloha.
Ohatra, i Tin, izay nahatsiaro fa ny zandriny Japoney dia tanora kokoa, 4 cm na tokony ho 2 santimetatra mahery noho Yin. Izany dia nifanaraka tamin'ireo hevi-dehibe ireo rahalahy japoney izay tsaroan'izy ireo.
Fikirakirana ny fifandraisana sy ny fifandraisana efa navaozina tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Rahalahy Japoney roa niara-maty tamin'ny taona WW II dia nanjary lasa zazavavy roa. Ian Stevenson, MD dia nanangona kambana kambana 31 izay nahatsiaro ny fiainany taloha nandritra ny fahazazany. Ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana naharitra ela teo amin'ny fiainana, mampiseho ny fomba fiasan'ny fiainan'ny olona ho tafaraka amin'ny havan-tiana. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Ian Stevenson, MD Study Twin
Fiovàn'ny fiaraha-monina sy ny fiaraha-monina: Maty ireo Japoney rahalahy izay niady tamin'ny Burmese ary niverina tany amin'ny foko misy azy izay niady, ary nampiseho ny fandresena ny tenany.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny zaza teraka indray: Ny miaramila japoney japoney izay niady tamin'ny Burmese, dia niorina indray tamin'ny tovovavy birmanina. Ireo tovovavy dia naneho fihetsika maneho fihetsika.
Tranga mitovitovy amin'ny tafika Japoney iray izay nateraka ho zazavavy ho an'ny renim-birmanina iray, izay nanehoan'ilay tovovavy ny toetran'ny lehilahy, na dia amin'ny maha-lesbiana azy aza, dia azo averina eto amin'ity pejy manaraka ity:
Miaramila Japoney, Cook, Reincarnates amin'ny Girl Burmese
Xenoglossy: Amin'ny maha-ankizy, i San sy Yin dia naheno ny fitenenana tamin'ny fiteny izay tsy takatry ny ray aman-dreniny. Azo inoana fa niteny tamin'ny fiteny Japoney ny kambana.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Na dia tsy nisy ny antonta-taratasy momba ny endriky ny endriky ny tarehin-javatra, dia nitovy tamin'ny zana-kisoa ireo havany ireo miaramila japoney.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Nanao tatitra ny kambana taorian'ny namonoana azy ireo ho miaramila Japoney, nahita ny reniny tany Japon izy ireo. Nanandrana nifampiresaka tamin'ny reniny izy ireo, saingy tsy hitany.